Iimagazini zeGeomatics - Phezulu kwe-40 ukuya kwiminyaka emi-5 kamva-kwiiGeofumadas
2013 siye sahlula iimagazini ezinikezelwe kwicandelo le-geomatics, zisebenzisa indawo yazo ye-Alexa njengesalathiso. Kwiminyaka emi-5 kamva senze uhlaziyo.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, iimagazini ze-geomatics ziye zavela ngokuthe ngcembe ngesingqi sesayensi esichazwa ngokuxhomekeka kakhulu kubuchwephesha kunye nokudityaniswa koqeqesho malunga ne-Geo-engineering. Imikhwa yangoku ibulale iimagazini ezimi mde, zahlaziya umxholo ophambili wezinye iimpapasho, zaza zavala umsantsa ophakathi kwelo phephancwadi liqhelekileyo lineposi yebhlog yedijithali; ukongeza ifuthe layo kwinethiwekhi yoluntu. Ixabiso elongeziweyo kulawulo lolwazi kunye nokusebenzisana phakathi kwabadlali kuye kwabaluleka nangakumbi ngendima yomshicileli oqhelekileyo yokuhambisa ulungelelwaniso lweziganeko zamanye amazwe, inkonzo yewebhu kunye nokupapashwa komxholo wedijithali.
Imilinganiselo usebenzisa i-Alexa usetyenziso
Ndisebenzisa ukulinganisa Alexa, Ngo-Matshi 31, 2019. Olu luhlu luyatshintsha kwaye luyatshintsha ngokuhamba kwexesha kuxhomekeka kwindlela elungileyo okanye engalunganga yewebhusayithi kunye nohlengahlengiso kwii-algorithms zikaGoogle. Ngokubanzi, luhlobo olulinganayo nabafundi okanye iindwendwe kunye nolwalamano lwezempilo lwendawo.
Ezantsi inqanaba le-Alexa, kungcono, yiyo loo nto uFacebook.com kunye noGoogle.com zihlala zihlala kumanani amabini okuqala. Akululanga kangako ukuba ngaphantsi kwe-100,000 ephezulu kwaye nangona kukho indawo ekumgangatho welizwe kule meko ndikhethe ukuyenza ndisebenzisa eyasehlabathini lonke, ebonisa kwitafile isikhundla seSpain njengolwazi olongezelelekileyo kunye nelinye ilizwe apho isiza sinendawo ebonakalayo.
Kuyathakazelisa, kuba kwi-10 ephezulu, ngaphaya kokuzama ukuba kukhuphiswano, kubonisa ukuhambelana okuboniswa ziindawo zokusasaza ulwazi kule nkqubo yezinto eziphilayo. Ngelo xesha zazimbini kuphela iindawo ezithetha iSpanish (iGeofumadas kunye neBhlog kaFranz). Namhlanje sineendawo ezine zeSpanishi, ngokukhula kweMephuGIS ethe yavela kwi-Top4, GIS kunye neBeers ezazingabonakali ngelo xesha kunye nebhlog yeTeritorio Geoinnova.
Le yimo entsha ye-Top40 kwi-2019.
Njengomqondiso, ndibonisa imeko yangaphambili kwi-2013
Uluphi uluhlu lwamaphephancwadi e-geomatics aluvela phi?
Ndisebenzise i-40 iyonke yoshicilelo, ndigcina uluhlu lwangaphambili, nangona ndiphelisa ubuncinci i-6 esele ipapashiwe, eyalelwa kwinqanaba elingaphantsi kwama-5,000,000, XNUMX. Ngelixa eso sisikhundla esibulalayo kwisiza, ndisandisile apho ukuze ndikwazi ukulinganisa ukukhula kwamaphephancwadi afanelwe ithamsanqa elingcono.
I-21 yale magazini iNgesi.
Ezili-14 zivela kumongo weSpanishi. Ngokwahluka kweGeofumadas kunye nebhlog yeprojekthi ye-gvSIG, banezithuthi kwezinye iilwimi nangona zaziveliswa okokuqala ngeSpanish.
Ezi-5 zinemvelaphi yaseBrazil. Ngokwahlukileyo kule meko, loo MundoGEO ikwanenguqulo yeSpanish kwindlela yayo.
AmaBrazil aphawulwe ngokuluhlaza, amaSpeyin e-orange kunye ne-Anglo-Saxon e-blue.
Uludwe lwe Top 10
Hayi Umagazini Usetyenziso lwehlabathi Epaña Usetyenziso Okunye usetyenziso
1 geospatialworld.net 94,486 - i-USA 94,448
2 gislounge.com 107,570 i-USA 55,355
3 geoawesomeness.com 113,936 i-USA 64,660
4 gpsworld.com 125,207 i-USA 126,865
5 geofumadas.com 130,586 25,307 Mekhsikho 19,983
6 mappinggis.com 162,860 10,143 Mekhsikho 9,182
10 acolita.com 250,823 36,159 Mekhsikho 26,249
Ezinye iziganeko zeTop10:
Ngokubanzi, bahlala kwi-10 ephezulu: gislounge, gpsworld, geofumadas, kunye ne-ArcGeek (ibhulogi ye-franz).
Abaqeshi abatsha kule top 10: Geospatialworld, Mappinggis, geoawesomeness, ClickGEO (blog kaAnderson Madeiros), ibhlog kaGeoinnova kunye neGis kunye neebhiya.
Top10 directionsmag.com waphuma 12, mapsmaniac.com owafayo, mycoordinates.org ku 30, 24 kunye mundogeo.com giscafe.com ukuya 11 kunye 19 Gisuser ukuba.
Uluhlu lwe-10 kwi-20
11 gim-ternational.com 268,868 - i-USA 83,208
13 i-directionsmag.com 316,516 - i-USA 162,383
15 pobonline.com 347,202 i-USA 207,854
17 lidarnews.com 524,281 i-USA 338,157
18 blog.gvsig.org 566,578 - Mekhsikho 30,385
Uluhlu lwe-21 kwi-30
21 digital-geography.com 716,191 i-USA 548,219
22 xyht.com 726,264 i-USA 374,066
23 geoconnexion.com 873,577 - EMzantsi Afrika 23,294
24 geoinformatics.com 882,085 - Indiya 398,567
25 giscafe.com 891,499 i-USA
27 gis-professional.com 1,291,383 - Indiya 629,685
28 ii-sensorsystems.com 1,554,262 -
30 ulwaziinfrastructure.com 1,700,212 - -
Uluhlu lwe-31 ukuya kwi-40 isikhundla
34 ejjournal.com 1,898,444
Ukuqukumbela, kubalulekile ukuhlangula ubukho beendawo ezili-14 zolwimi lwaseSpain (ngaphambi kokuba zibekho i-8 kuphela) kuluhlu oluntsonkothileyo lokulinganisa indawo ephezulu enomdla. Nangona intsimi yabantu abathetha iSpanish ibanzi kakhulu kunale 14, njenge uluhlu lweNosolosig enomdla.
Kuyinyaniso ukuba ukwenza ukhetho lweziza ekungeneni kwimingxuma ukuba bebeloluhlu lokuqala kwiminyaka emi-5 eyadlulayo, khange kubelula; ngakumbi ekubeni umda wokuqala wawuthanda iimagazini ezithetha isiNgesi; etshintshe ngoku. Ngexesha elithile siza kwenza uhlaziyo olutsha, sijonga ukuba abameli abanomdla beendaba zaseSpain bahlala kule nkundla: njengomzekelo, Geographical Geography oye wahlala nge-5 iminyaka kunye nokufikelela kwiindlela ngaphaya kwewebhu apho abaninzi bethu bangathanda ukufumana; ukuba kulungile, iGeografiainfinita kufuneka ibe kwindawo ye-8; efanayo emva kokupapashwa esiye kwabikwa nguwe Interesporlageomatica.com ekufuneka ivele kolo phezulu, kwindawo yama-37 ene-2,590,195 yexabiso. Ke, ekubeni kusikiwe, sishiye igrafu kunye neetafile apho; Ukuba uziva ukuba nayiphi na enye indawo kufuneka ibe kolu luhlu okanye ubuncinci kujoliswe kuyo ukuze iphinde iqhubeke, nceda wazise editor@geofumadas.com
Siyakwenza okufanayo nakwi I-Top40 kwi-geospatial Twitter, apho kwakudingeka ukuba udwebe isicatshulwa saseSpeyin nesiNgesi.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Umzuzu wafika: #GeospatialByDefault; ujoyine i-GWF 2019 e-Amsterdam
Post Next I-GRAPHISOFT iqoka uHu Roberts njengoMlawuli oyiNtlokoOkulandelayo »